Sawirada Toddobaadka. Somalia’s week in pictures (30 June – 08 July) 2017. | Arlaadi
July 9, 2017 | Filed under: ARIMAHA BULSHADA,WARARKA MAANTA,XISBIGA UMMADDA | Posted by: arlaadi
Axad July 9, 2017| Arlaadi Online
1- WAR-MURTIYEED laga soo saaray Shirweynaha CAFIS oo muddo 2 maalmood ah 5-6 July, 2017 ka socday magaalada Turku ee dalka Finland.
2- My Time: Youth raise thousands to help humanitarian crisis in Somalia
3- Guud ahaan Soomaaliya ayaa looga dabaal dagayaa sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii Gobollada Koonfureed ay ka xuroobeen gumeystihii Talyaaniga iyo israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur oo hadda laga joogo 57 sanadood.
4- Madaxweynaha iyo R/wasaaraha oo qaabilay Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway.
5- Soomaalida gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo Xusay 1-da Luulyo.
6- Magaalada Muqdisho oo si wayn looga xusay maalinta Xuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha oo ubax dhigay taalada Daljirka dahsoon.
7- Xuska 1-da Luulyo oo lagu qabtay magaalada Garoowe, Puntland
8- Ra’iisul wasaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo Addis Ababa uga qayb galaya shir madaxeedka Midowga Africa oo sanadkaan diirada lagu saaray horumarinta Dhallinyaradda Africa iyo isbeddel lagu samaynayo Wakiiladda Midowga Africa.
9- Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo Soomaaliya ugu qeybgalay shir madaxeedka midowga Afrika ayaa kulan la yeeshey mas’uuliyiin kala duwan oo shirka ka qeybgashay.
10- Wasiir Bayle “Bil walba waxaa naga go’an inaan shacabka u gudbino horusocodka W. Maaliyadda iyo Waxqabad-keeda”. Wasiirka Maaliyadda XFS mudane Cabdiraxman Ducaale Bayle ayaa saxaafada uga warbixiyey barnaamijkii bilaha ahaa ee Wasaaradda Maaliyadda, kaas oo looga hadlo waxyaalaha u qabsoomay wasaaradda iyo caqabadaha u baahan in la xaliyo.
11- Shirka Golaha Amniga Qaranka oo Muqdisho ka Furmay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guddoomiyey shirka Golaha Amniga Qaranka oo muddo labo maalmood ah ka socday xarunta Madaxtooyada.
12- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo la caweeyay qaar ka mid ah bulshada Muqdisho.
13- Madaxda dowladda oo ka qeyb galay Barnaamijka Taakuleynta Ciidamada. R/Wasaare Khayre “Calanku ma taagnaan karo oo cirka kama babban karo haddaanu ciidan ku tiirsanayn”. Madaxda ugu sareysa dalka ayaa si wadajir ah uga qeyb qaatay barnaamij lagu taageereyey Ciidanka Qaranka oo usoo qaban-qaabiyey Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, isla markaana dhaqaale loogu uruurineyey ciidamadda qalabka-sida.
14- Kalfadhigii labaad ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya oo ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana si rasmi ah u furay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
15- In ka badan 100 Dal oo Saxiixay Sharci mamnuucaya hubka Nukliyeerka. Soomaaliya ayaan saxiixin heshiiska.
16- Al Shabaab oo lagala wareegay Deegaano ay gacanta ku hayeen gaar ahaan Buuraha Galgala ee kuyaala gobolka Bari.